Photo Editing Software လေးတစ်ခု — MYSTERY ZILLION
Photo Editing Software လေးတစ်ခု
November 2010 edited January 2011 in Sharing
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊မိသားစု၀င် တွေနဲ့ အပျော်တမ်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် အခမဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ Photo Editing Software လေးတစ်ခုကို မိတ်ဆက် ပေးချင်ပါတယ်။Photo Scape မှာ အပျော်တမ်း ဓာတ်ပုံတွေ အတွက် Online ပေါ်မှာ မေ၀မျှခင်၊ Print မထုတ်ခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ တည်းဖြတ်မှုတွေကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Photo Scape မှာ Editor အသုံးပြုပြီး Crop ဖြတ်ခြင်း၊အလင်းအမှောင် ချိန်ညှိခြင်း၊ စာသားများ၊ ရုပ်ပုံ Effect များ ပေါင်းထည့်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်သလို ဓာတ်ပုံတွေကို Animated GIF အဖြစ် ဖန်တီးခြင်း၊ရုပ်ပုံကားချပ်ကြီး အဖြစ် စုပေါင်းထုတ်လုပ်ခြင်း စတာတွေကိုပါ အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Screen Capture, Color Picker, Raw Converter, Batch Editor, Splitter စတဲ့ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်အသုံးချခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိရိယာ တန်ဆာပလာတွေလည်း အပြည့်အစုံ ပါ၀င်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Photo Scape ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုက Photoshop Software လို အသုံးပြုရတာ မခက်ခဲလို့ခုမှ စတင်သုံးစွဲသူတွေတောင် အလွယ်တကူ စမ်းသပ်သုံးစွဲရင်း အကြိုက်တွေ့သွား နိုင်ပါတယ်။အိမ်သုံး အတွက်သာမက ဓာတ်ပုံတွေကို အလွယ်တကူ တည်းဖြတ်ချင်တဲ့ ပညာရှင်တွေပါ အခမဲ့ ရယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ Photo Space ကို ရယူနိုင်တဲ့ လိပ်စာက http://www.photoscape.org ဖြစ်ပါတယ်။
Adobe Photoshop is the best software for photo editing.There are many rewards for putting the effort into achievingaPhotoshop proficiency. The journey, however can be very difficult if you try to learn it all yourself without any guidance or even if you choose the wrong method of learning. The Photoshop program enables effective editing of photographs and other graphical content with various tools that give the user options for manipulation.Photoshop gives even the most basic user the opportunity to createacolor palette of opportunity.